Kuvaka Nhau Yebhuku: Iyo 7 Prospect Inoshuvira Bhizinesi Rako Kunotsamira pa | Martech Zone
Anenge mwedzi wapfuura, ini ndakazotora chikamu mumusangano wekushambadzira wevatengi. Izvo zvaive zvakanakisa, kushanda pamwe neyekubvunza kunozivikanwa nekugadzira nzira dzemigwagwa dzemakambani epamusoro tekinoroji. Sezvo nzira dzemumigwagwa dzaigadzirwa, ndakafadzwa nematanho akasarudzika uye akapatsanurwa timu akauya nawo. Nekudaro, ini ndaivewo ndakatsunga kuita kuti timu itarise pamusika wakanangwa.
Innovation inzira yakakosha mumaindasitiri mazhinji nhasi, asi haigone kuvhiringidza mutengi. Makambani anoshamisa ane ingenius mhinduro akakundikana pamusoro pemakore nekuti vakauya kumusika nekukurumidza, kana kupa chishuwo chisati chavapo. Ose ari maviri anogona kuperetera nhamo - kudiwa chinhu chakakosha pane zvese zvinobudirira chigadzirwa kana sevhisi.
Pandakatumirwa kopi ye Kuvaka Storybrand, naDonald Miller, ndaive pachokwadi ndisina kufara kwazvo kuti ndiriverenge saka rakagara pasherufu yangu yemabhuku kusvika nguva pfupi yadarika. Ndakafunga kuti yaizove imwe push ye Storytelling uye kuti ingashandure sei kambani yako… asi hazvisi. Muchokwadi, iro bhuku rinovhura ne "Iri harisi bhuku rekuudza nyaya yekambani yako." Wee!
Ini handidi kusiya iro bhuku rese, inokurumidza uye inodzidzisa kuverenga iyo yandinokurudzira zvikuru. Nekudaro, pane runyorwa rwakakosha rwandinoda kugovera - kusarudza a chido inoenderana nekupona kwechiratidzo chako.
Vanomwe Tarisiro Vanoshuvira Kupona KweBrand yako Zvinoenderana Ne:
Kuchengetedza zviwanikwa zvemari - Uri kuenda kunochengetera yako mutengi mari?
Kuchengetedza nguva - Zvigadzirwa zvako kana masevhisi achapa vatengi vako nguva yakawanda yekushanda pazvinhu zvinonyanya kukosha?
Kuvaka masocial network - Zvigadzirwa zvako kana masevhisi anokurudzira kuda kwevatengi vako kuti ubatanidzwe?
Kuwana chinzvimbo - Uri kutengesa chigadzirwa kana sevhisi iyo inobatsira mutengi wako kuwana simba, mukurumbira, uye kunatsiridza?
Kuunganidza zviwanikwa - Kupa kwakawedzera kugadzirwa, mari, kana kudzikira kwemarara kunopa mikana kune mabhizinesi kuti abudirire.
Chido chekuzvarwa nacho chekupa - Vanhu vese vane chido chekuzvarwa kuti vape.
Chido chekureva - Mukana wevatengi vako kutora chikamu mune chimwe chinhu chikuru kupfuura ivo.
Sokutaura kunoita munyori Donald Miller:
Vavariro yekumaka kwedu inofanirwa kunge iri yekuti vese vangangove vatengi vanoziva chaizvo kwatinoda kuvaendesa.
Ndezvipi zvishuwo zvauri kurovera mukati nekara rako?
Nezve Kuvaka Nhau yeNhau
Maitiro eBrandBrand imhinduro inoratidzwa kune vatungamiriri vebhizimusi vanorwa pavanotaura nezvemabhizinesi avo. Iyi shanduko nzira yekubatana nevatengi inopa vaverengi mukana wekupedzisira wemakwikwi, kuburitsa chakavanzika chekubatsira vatengi vavo kuti vanzwisise mabhenefiti ekushandisa zvigadzirwa zvavo, mazano, kana masevhisi.
Kuvaka NhauBrand inoita izvi nekudzidzisa vaverengi iyo nomwe nyaya yepasirese nongedzo vanhu vese vanopindura; chikonzero chaicho vatengi vanotenga; maitiro ekurerutsa meseji meseji kuti vanhu vanzwisise; uye maitiro ekugadzira meseji inoshanda kwazvo kune mawebhusaiti, mabrochure, uye vezvenhau.
Kunyangwe iwe uri mutungamiriri wekushambadzira wekambani yemabhiriyoni emadhora, muridzi webhizinesi diki, wezvematongerwo enyika anomhanyisa chinzvimbo, kana muimbi anotungamira webhendi redombo, Kuvaka NhauBrand inozoshandura zvachose matauriro aunoita nezve zvauri, zvaunoita, uye kukosha kwakasarudzika kwaunounza kune vatengi vako.
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa weAmazon uye ndinoshandisa zvinongedzo kutenga bhuku mune ino positi.
Tags: muchisobrandingkuvaka nyaya yenyayamutengi nyayachidoDonald millerKugonesa Kugonesastorybrand
WordPress Kuchengeta Rondedzero: Yekupedzisira Rondedzero yeMazano, Zvishandiso, uye Zvakanakisa Maitiro